တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဌာန | Union Attorney General’s Office Skip to main content
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အမှုလိုက်ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်
၁။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်သည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းက တရားလို သို့မဟုတ် နစ်နာသူအဖြစ် ပါဝင်သော ရာဇ၀တ်ဆိုင်ရာ အမှုများတွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)(ဈ)၊ ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)တို့အရ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူလမှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ အယူခံမှု၊ အထွေထွေလျှောက်ထားမှု နှင့် အထူးအယူခံမှုများကို နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရပါသည်။ လိုအပ်ပါကလည်း နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သတ်သော အမှုများတွင် ရုံးသဟာယအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် ကြားနာသော သေဒဏ်ထိုက်သည့် ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ အမှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရသော တရားခံက ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသဖြင့် ရှေ့နေငှားရမ်းနိုင်ခြင်း မရှိ ကြောင်း တင်ပြလျှင် အစိုးရစရိတ်ဖြင့် ရှေ့နေငှားရမ်းပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဆိုပါ အမှုတွင် တရားခံရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါခွင့်ပြုကြောင်း တာဝန်ပေးအပ်သည့် စာကို သက်ဆိုင်ရာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအား အကြောင်းကြားသည့် ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၄။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ ကြားနာသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံမှုနှင့် ပြင်ဆင်မှုများတွင် အပြီးအပြတ်လွှတ်သည့် အမိန့်ကို ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ အရ အထူးအယူခံဝင်သင့်ကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ကာလ စည်းကမ်းသတ်ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ အထူးအယူခံမှု တင်သွင်းရန် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၅။ အထူးအယူခံခုံရုံး သို့မဟုတ် စုံညီ ခုံရုံးဖြင့် စစ်ဆေးစီရင်သည့် အမှုမှအပ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က အပြီးသတ် စစ်ဆေးစီရင်ထားသည့် မည်သည့် အမှုကို မဆို အများပြည်သူအကျိုးငှာ အရေးယူလောက်သော ပြဿနာကို ပြည်ထောင်စုတရား စီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ အရ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်က အထူးအယူခံခုံရုံး သို့မဟုတ် စုံညီခုံရုံးဖြင့် ပြန်လည် စစ်ဆေးစီရင်ရန် သင့်-မသင့် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုတရား သူကြီးချုပ်ထံ လျှောက်ထားရသည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၆။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ချမှတ်သည့် စီရင်ချက်၊ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်ပါဝင်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများတွင် အရေးယူလောက် သော ဥပဒေပြဿနာပေါ်ပေါက်ပါက အထူးအယူခံမှု တင်သွင်းရန် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၇။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ စစ်ဆေးစီရင်လျက်ရှိသည့် ရာဇ၀တ်ဆိုင်ရာ အမှုများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ မည်သည့်အဆင့်၌မဆို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ တာဝန် ပေးအပ်ချက်အရ အမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားရန် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထား သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၈။ မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ တာဝန် ပေးအပ်ချက်အရ ဥပဒေရေးရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြည့်ရှုစိစစ်ရန် လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၊ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းထံမှ လိုအပ်သည့်အမိန့်နှင့် စီရင်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အမှုတွဲနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းယူရန် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာအယူခံ၊ ပြင်ဆင်စိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
၁။ တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာအယူခံ ၊ပြင်ဆင်စိစစ်ရေးဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (ဈ) နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ (ဃ) တို့အရ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များဖြစ်သည့် အယူခံမှု၊ပြင်ဆင်မှု၊ အထူး အယူခံမှုများကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ စိစစ်တင်ပြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံ၊ ပြင်ဆင် စိစစ်ရေးဌာနခွဲသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများက အယူခံမှု၊ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းပေးပါရန် တင်ပြလာမှု များအပေါ် ပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် အယူခံမှု တင်သွင်းရန် သင့်-မသင့် စိစစ်၍ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က တစ်ဆင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က စိစစ်ပြီး ဒုတိယရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြ၍ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်က ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းရန် သို့မဟုတ် အယူခံမှုဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက ပြင်ဆင်မှုတင်မည့် သို့မဟုတ် အယူခံဝင်မည့် လျှောက်လွှာစာကြမ်း ပြုစုအတည်ပြုချက်ရယူပြီး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ ပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် အယူခံဝင် သည့် လျှောက်လွှာ တင်သွင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်က ပြင်ဆင်မှု မတက်သင့် ကြောင်း သို့မဟုတ် အယူခံ မ၀င်သင့်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြ၍ အဆုံးအဖြတ်ရယူပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများသို့ ပြန်ကြားပါသည်။ ၃။ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် မှုခင်းတပ်ဖွဲ့၊ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ဌာနတို့မှ တင်ပြလာသော တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ တရားခံ ထုတ်ရန် အခက်အခဲ ကြောင့်ရုံးပြောင်း လျှောက်ထားလိုသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း အလားတူအဆင့်ဆင့် စိစစ်တင်ပြ ဆုံးဖြတ်မှု ခံယူ၍ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ ရာဇ၀တ်အထွေထွေမှု တင်သွင်း ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၄။ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ဆောင်ရွက်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်နစ်နာသူများက တင်ပြ တိုင်တန်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြစာအပေါ် စိစစ်ပြီး အလားတူပင် အဆင့်ဆင့် တင်ပြကာ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်က ပြင်ဆင်မှု/ အယူခံမှုတင်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ ပြင်ဆင်မှု/ အယူခံမှု တင်သွင်းရေး ဆောင်ရွက်ရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ် ရုံးများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများသို့ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ စီရင်ချက်၊ တာဝန်ခံမိတ္တူများတောင်းခံ၍ တင်သွင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၅။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ချမှတ်ခဲ့သည့် အမိန့်အပေါ် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်က အထူးအယူခံဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ စီရင်ချက် အမိန့် တာဝန်ခံ မိတ္တူများ တောင်းခံရယူကာ ရာဇ၀တ် အထွေထွေ လျှောက်လွှာ (အထူး)နှင့် ရာဇ၀တ်အထူးအယူခံ လျှောက်လွှာတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ တင်သွင်း ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၆။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ချမှတ်ခဲ့သည့်အမိန့်အပေါ် အထူးအယူခံမှု တင်သွင်း ပေးပါရန် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် နစ်နာသူအမှုသည်က လျှောက်ထားလာသည့် အပေါ် စိစစ်ပြီး အဆင့်အဆင့်တင်ပြကာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ပါသည်။ ၇။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများမှ အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သည့် အမှု အမိန့်ချသဖြင့် တင်ပြလာသော ဥပရအမှုလိုက်ပုံစံ(၅)များကို အတည်ပြုသင့်၊ မသင့် စိစစ်တင်ပြပါသည်။လိုအပ်ချက်များရှိပါက ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်စေရန် လည်းကောင်း၊ တရားရုံး အဆင့်ဆင့်၏ စီရင်ချက်အမိန့်များ တောင်းခေါ်စိစစ်ရန် လိုအပ်ပါက ကူးယူပေးပို့ရန် လည်းကောင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်ရုံး များသို့ အကြောင်းကြားပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက ပြန်လည်တင်ပြလာပါက စိစစ်၍ အထက်ဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြကာ ပြင်ဆင်မှု/ အယူခံမှု တင်သွင်း သင့်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ ပြင်ဆင်မှု/ အယူခံမှု တင်သွင်းပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး အဆင့်ဆင့်သို့ ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါက ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးသို့ ညွှန်ကြားပါသည်။ ၈။ နိုင်ငံတော်က တင်သွင်းသည့် ပြင်ဆင်မှု/ အယူခံမှု/ အထွေထွေ လျှောက်ထားမှု များတွင် လျှောက်ထားခံရသူများ၏ နေရပ်လိပ်စာမှာ ဆင့်စာ အတည်မဖြစ်၍ လိပ်စာသစ် တင်ပြရန် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က တောင်းခံလာပါက လိပ်စာသစ်တင်ပြ နိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများသို့ အကြောင်း ကြားပြီး လိပ်စာသစ် မရရှိပါက ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆၁ က အရ အမှု ယာယီ ပိတ်သိမ်းရန် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထားတင်ပြ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
(က) တရားမစွဲမီ ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးရေးနှင့် တင်ပြချက်များစိစစ်ရေးဌာနခွဲ အနေဖြင့် တရားစွဲ အဖွဲ့ အစည်းများသို့ တရားမစွဲမီဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး ဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများမှ လမ်းညွှန်အကြံပြုချက် တောင်းခံလာခြင်းအပေါ် လမ်းညွှန် အကြံပြုခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်ရုံးများက ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၏ ဥပဒေ အကြံပြုချက်များအပေါ် အတည်ပြုချက်နှင့် ပြင်ဆင် အကြံပြုချက်မိတ္တူများကို စိစစ်ခြင်း၊ တင်ပြစာ/တိုင်စာများအပေါ် စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် နည်းဥပဒေ ၆၁)
(ခ) တရားမစွဲမီဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများမှ တိုက်ရိုက် ဥပဒေအကြံဥာဏ်တောင်းခံသည့်ကိစ္စများတွင် ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ တိုက်ရိုက်ဥပဒေအကြံဥာဏ်တောင်းခံသည့်အခါ ဥပဒေအကြံဥာဏ် ပေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများမှ ဥပဒေအကြံပြုချက် လမ်းညွှန် မှုတင်ပြတောင်းခံခြင်း တို့အပေါ် လမ်းညွှန်အကြံပြုပြန်ကြားခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများမှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်/မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် ပြင်ဆင်ချက် မိတ္တူနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများမှ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် အတည်ပြုချက် မိတ္တူများကို စိစစ်၍ အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်အကြံပြုခြင်း များကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ (ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ ၇၂၊ ၈၁(ဃ)၊ ၈၂(ဂ)၊ ၈၃(ခ) )
(ဂ) တင်ပြစာ/တိုင်စာများအား စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြစာ/တိုင်စာများကို စိစစ်၍ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၏ မှတ်ချက်များအရလည်း ကောင်း၊ မိမိဌာနခွဲအတွင်းရှိ ဥပဒေအရာရှိများ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်အရလည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ အား စိစစ်တင်ပြစေခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရုံးအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်စေခြင်း၊ ရဲစက္ကူအမှုတွဲ တောင်းခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဥပဒေအကြံပြုချက်အပေါ် တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါက ရဲစက္ကူအမှုတွဲ တောင်းယူစိစစ်တွေ့ရှိချက်အရ ပေါ်ပေါက်ချက်အပေါ် ဥပဒေ နှင့်အညီ ဥပဒေအကြံပြုချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀ )
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေ အရာရှိတို့က တင်ပြစာ/တိုင်စာအပေါ် စိစစ်တင်ပြလာပါက စိစစ်တင်ပြချက် သင့်လျော်မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ စိစစ်ပြီး အဆင့်ဆင့်တင်ပြ၍ အဆုံးအဖြတ်ခံယူရပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၏ တင်ပြစာ/တိုင်စာအပေါ် စိစစ်တွေ့ရှိ ချက်များအရ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရာရှိများအား အသိပေးခြင်း၊ အကြောင်းကြားခြင်း တို့ကို စာထုတ်၍ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
(င) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများက ၄င်းတို့ထံ ရောက်ရှိလာသော တင်ပြစာ/တိုင်စာများအပေါ် စိစစ်တင်ပြရန် သို့မဟုတ် အမှုအခြေအနေ အား တင်ပြရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားလာပါက အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများသို့ ဆောလျင်စွာ စိစစ်တင်ပြစေပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့သို့ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်တို့က ၄င်းတို့ထံ ရောက်ရှိ လာသော တင်ပြစာ/တိုင်စာများသည် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်သဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်ရုံးများသို့ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(စ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ တရားမစွဲမီဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးရေးနှင့် တင်ပြချက်များ စိစစ်ရေး ဌာနခွဲအနေဖြင့် တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများသို့ တရားမစွဲမီဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေ ချုပ်ရုံးများသို့ လမ်းညွှန်အကြံပြုခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများက ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၏ အကြံပေးအတည်ပြုချက်/ ပြင်ဆင်ချက်များ အပေါ် စိစစ်၍ အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တင်ပြစာ/ တိုင်စာများအပေါ် စိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာနများအတွက် အမှုလိုက်ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
၁။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (င)၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာချွန်တော် အမိန့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ နှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏ စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဦးစီးဌာနရှိ ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အမှုလိုက်ဌာနခွဲ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထားသည့် စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား လိုက်ပါဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
၂။ ထို့ပြင်ဤဌာနသည် စာချွန်တော်အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကြံဥာဏ်တောင်းခံချက် များ၊ တိုင်ကြားစာများကိုလည်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ခုံရုံးများဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးတို့တွင် ရုံးသဟာယအဖြစ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ကိုယ်စား ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပါသည်။
၄။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများသည် စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထား ခံရသည့် အခါ ယင်းဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးက ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ထံလိပ်မူ၍ စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုတွင် ယင်းတို့ကိုယ်စား ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အကြောင်းကြားသည့် မေတ္တာရပ်ခံ အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူ လျှောက်ထားခံရသူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ပြန်ကြား အစီရင်ခံစာမိတ္တူ၊ ပြန်လှန်ကျမ်းကျိန်လွှာမိတ္တူနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြပါသည်။
၅။ စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုအတွက် လျှောက်လဲချက်စာကြမ်းများအား ဌာနခွဲရှိ ဥပဒေ အရာရှိများကရေးသားပြုစု၍ လျှောက်လဲချက်အား အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်/ အတည်ပြုပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ အပြီးသတ်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့တွင် အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက် ပေးပါသည်။
၆။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေ အရ အပြီးသတ်ကြားနာ ဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အား သိရှိနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ အဆင့်ဆင့်တင်ပြပါသည်။
၇။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများကို စာချွန်တော်အမိန့် ထုတ်ဆင့်ပေးရန် လျှောက်ထားမှုများ၌ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ၂၀-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံး၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံးများသို့ ဖြန့်ဝေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့က ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ များအား စိစစ်ကြားနာရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ၇၀ အရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်အား ရုံးသဟာယအဖြစ် ဖိတ်ကြား၍ ဥပဒေအကြံဥာဏ်များ တောင်းခံသည့်အခါ ရှေ့နေချုပ်ကိုယ်စား ဤဌာနခွဲမှ ဥပဒေအရာရှိအဆင့် (၁) နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့မှ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၉။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုပေါင်း (၁၇) မှုအား လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရုံးသဟာယ အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှု (၁) မှု၊ အယူခံမှု (၂) မှုတို့ကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန တရားမဆိုင်ရာအမှုလိုက်ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်
၁။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်သည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းက တရားလို သို့မဟုတ် တရားပြိုင်အဖြစ်ပါဝင်သော တရားမမှုများတွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ၊ ပုဒ်မ ၂၆ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၆ ပုဒ်မခွဲ (င) တို့အရ ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းနှင့် အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့သည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ချုပ်ဆိုသော ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ ၊ အခြားစာချုပ်စာတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်ပါက အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေအရ ဖြေရှင်းရာတွင် လိုအပ်သည့် ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၃။ တရားမဆိုင်ရာ အမှုလိုက်ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ -
(က) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားဌာနများက ဥပဒေအကြံတောင်း ခံခြင်းများနှင့့််စပ်လျဉ်း၍ တရားမကြောင်းအရ သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါက စိစစ်၍ အကြံပြုချက်ပြန်ကြားခြင်း၊
(ခ) ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးများက အကြံပေးလမ်းညွှန်မှုတောင်းခံသည့် တရားမကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အမှုများကိုစိစစ်၍ လမ်းညွှန်အကြံပြုပြန်ကြား ခြင်း၊ (ဂ) ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးများက တရားမကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏ အကြံပြုပြန်ကြားချက်တို့အား မိတ္တူပေးပို့သည်ကိုစိစစ်၍ အတည် ပြုခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက ပြဆင်အကြံပြုပြန်ကြားခြင်း၊
(ဃ) ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးများက တင်ပြသော တရားမမူလမှု၊ တရားမ ဇာရီမှုများ၏ ပြီးပြတ်ချက်ပုံစံတို့ကိုစိစစ်၍ အတည်ပြုခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ အထွေထွေ လျှောက်ထားမှုတို့ တင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါက တင်သွင်းခြင်းနှင့် အဆိုပါအမှုတို့တွင် အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ကြားဖြတ်အမိန့်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ အပြီးသတ်ချမှတ်သည့် အမိန့်များနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ အထွေထွေလျှောက်ထား မှုများတွင် တင်သွင်းပေးရန် ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးများက တင်ပြလာပါက စိစစ်၍ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ တင်သွင်းပေးခြင်း နှင့် အဆိုပါအမှုများတွင် အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (စ) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်များက တက်ရောက်သည့် တရားမ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးစေမှုနှင့် အထွေထွေလျှောက် ထားမှုများတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့က ၎င်းတို့ကိုယ်စား အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အကြောင်းကြားပါက အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) အများပြည်သူဆိုင်ရာ လှူဒါန်းမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုရန်ဖြစ်ပါက တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ-၉၂ အရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ တရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံခြင်းကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ၁-၁-၂၀၁၆ မှ ၃၀-၆-၂၀၁၆ ထိ တရားမကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပေးခဲ့သည့်အမှု(၂၅)မှု၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့် အယူခံမှု/ ပြင်ဆင်မှု (၈) မှုနှင့် တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၉၂ အရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က တရားစွဲဆို ခွင်ြ့ပုမိန့်ထုတ်ပေးရန် သင့်၊ မသင့် စိစစ်သည့်အမှု (၇) မှုတို့ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ တရားမဆိုင်ရာအမှုလိုက်ဌာနခွဲက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
697538Since: 08/01/2013 - 19:50 Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix